စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ် - Katio
နေအိမ်> စက်မှုလုပ်ငန်းများ> စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်
သုံးစွဲသူများနှင့်ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိရိယာများကိုစျေးကွက်အမျိုးမျိုးသို့ဖြန့်ချိသောကုမ္ပဏီများ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအသုံးပြုသူဗဟိုပြုနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည်အရေးကြီးသည်။ နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည်ဒီဇိုင်းသံသရာကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် SKUs များနှင့်သုံးစွဲသူများစိတ်ကြိုက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကိုကူညီသည်။ ကနေ လေယာဉ် မှ မော်တော်ယာဉ်များ မှ ဆေးရုံများ , အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့်မြင့် feature များမှတစ်ဆင့်တန်ဖိုးကိုပို့ဆောင်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများတိုးတက်အောင်နီးပါးနေရာတိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Rapid Injection မှို
ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့် 3D ပုံနှိပ်စက်များသို့မဟုတ်စက်ယန္တရားပုံစံများဖြင့်အစောပိုင်းဒီဇိုင်းများကိုလျင်မြန်စွာကြားဖြတ်။ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
သင်၏ကုန်ကြမ်းကွင်းဆက်ကိုရိုးရှင်းသောပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူရိုးရှင်းလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်၍ ကုန်ပစ္စည်းများကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်သည်။
လျင်မြန်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ HP ကဒီဇိုင်းလည်ပတ်ချိန်ကိုလျှော့ချသည်
The tech giant used injection molding to trim development time from months to weeks for its next-generation printers. While developing its next-generation inkjet printer, HP turned to Protolabs’ injection molding service to slash design cycle time fromastandard, six- to eight-week timeframe to just 15 days.
What Materials Work Best for Consumer and Computer Electronic Components?
ABS. This reliable thermoplastic is widely used in industries like consumer electronics. It brings general-purpose performance for parts like electronics enclosures and handheld devices and is also relatively inexpensive.
လူမီနီယမ်။ This material can be machined or formed through sheet metal fabrication to create housings, brackets, or other metal parts that need high strength and low weight are required.
Elastomers ။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းမှိုနှစ်မျိုးလုံးတွင်ရရှိနိုင်ပါကသက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် elastomeric ပစ္စည်းများများစွာကိုရွေးချယ်ပါ။ Overgolding ကို ergonomic grips များ၊ ခလုတ်များသို့မဟုတ်လက်ကိုင်များရှိသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်လည်းရရှိနိုင်သည်။
Polycarbonate ။ ဤသည်ခိုင်ခံ့ပြီးအလွန်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည် thermoplastic နိမ့်ကျုံ့နှင့်ကောင်းသောရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သောကြည်လင်သည့်အဆင့်တွင်ရရှိနိုင်သောပွင့်လင်းမြင်သာသောပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအဖုံးများနှင့်အိမ်များအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
အများသုံး application များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သုံးစွဲသူများနှင့်ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စွမ်းရည်များစွာရှိသည်။ အသုံးများသော application အနည်းငယ်မှာ -
Prev: ပုံ လေကြောင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး
နောက်တစ်ခု - မော်တော်ကား
ပိုကောင်းတဲ့ CNC မှိုဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်လာ!
ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် CNC စက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်မျှအရေးပါသနည်း။
ဇန်နဝါရီလ 21 2021
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကားအစိတ်အပိုင်းများကိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် CNC စက်များသည်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။
ဇန်နဝါရီလ 20 2021
ဇန်နဝါရီလ 19 2021
မြေပုံအညွှန်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ